बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आजबाट, मोदी काठमाडौं आउँदै, उपत्यकामा दुई दिन बिदा – Everest Times News
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आजबाट, मोदी काठमाडौं आउँदै, उपत्यकामा दुई दिन बिदा
२०७५ भाद्र १४, बिहीबार ०८:२०
काठमाडौं । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन आजबाट राजधानीमा शुरु हुँदैछ ।
दुई दिने सम्मेलनमा सहभागी हुन म्यानमारका राष्ट्रपति विन्ट मिन, भुटानका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्का प्रमुख सल्लाहकार दसो छिरिङ वाङचुक र श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना काठमाडौं आइपुगिसकेका छन् ।
आजै शुरु हुने सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुच चाओचा केहीबेरमा काठमाडौं ओर्लिँदै छन् ।
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनलाई ध्यान दिँदै गृह मन्त्रालयले उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थालाई बिदासमेत दिएको छ ।
के हो बिम्स्टेक ? कसरी भयाे सुरुवात ?
बिम्स्टेक सात मुलुकहरुको एक अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो । यो संगठनमा दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुक छन् । यसको पूरा रुप बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बंगालको खाडीको योजना भन्ने, हुन्छ । यो संगठनकाे सदस्य बंगलादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, भुटान र नेपाल हुन् । यी मुलुकहरु बंगालको खाडीसँग निर्भर रहेका छन् ।
यो सहकार्यको लागि अहिलेसम्म १४ प्राथमिकताहरु निर्धारण गरिएको छ । अहिले बिम्स्टेक मुलुकको व्यापार सम्झौताको विषयमा छलफल भईरहेको छ । यो संगठनको नेतृत्व पनि वर्णनुक्रमको आधारमा परिवर्तन हुने गरेको छ ।
सन् १९९७ जुन ६ थाइल्याण्डको बैंककमा यसको सानो रुपको स्थापना भएको थियो । जसलाई बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्ड आर्थिक सहयोग (बिस्टेक) नाम राखिएको थियो । सन् १९९७ डिसेम्बर २२ मा यो संगठनमा म्यानमार पूर्ण सदस्य बनेको थियो । यससँगै यो संगठनको नाम म्यानमारलाई पनि जोडेर बिम्‍स्टेक राखिएको थियो । १९९८ मा नेपाल निरीक्षक मुलुक बन्न पुगेको थियो र सन् २००४ मा नेपाल र भुटानलाई पनि सो संगठनमा समावेश गरिएको थियो ।
सन् २००४ को जुलाई ३१ मा बिम्‍स्टेकको पहिलो सम्मेलन आयोजना भएको थियो । यो सम्मेलनले संगठनको अहिलेको नाम दिएको हो । बिम्‍स्टेकका १४ प्रमुख उद्देश्यहरु रहेका छन् । जसमा दक्षिण एसियन र दक्षिणपूर्वी एसियन मुलुकहरुको बीचमा प्राविधिक र आर्थिक सहकार्य बढाउने योजनाहरु रहेका छन् ।
अहिलेसम्म यसको तीन सम्मेलन भएका छन् । ४-४ वर्षमा यसको शिखर सम्मेलन हुने गरेको छ । सन् २००४ को जुलाई ३१ मा यसको पहिलो सम्मेलन थाइल्याण्डको बैंककमा सम्पन्न भएको थियो । दोस्रो सम्मेलन भारतको नयाँ दिल्लीमा सन् २००८ को नोभेम्बर १३ मा भएको थियो । सन् २०१४ को मार्च ४ मा तेस्रो सम्मेलन म्यानमारको न्यपेतमा भएको थियो ।
बिम्‍स्टेकको प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्रहरुमा यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन, आतंकवाद तथा सांगठनिक अपराधविरुद्धका कार्यक्रमहरु, वातावरण तथा संकट व्यवस्थापन, ऊर्जा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार तथा लगानी, प्रविधि, माछापालन, गरिबी उन्मूलन, मानिसदेखि मानिससम्मको सम्पर्क, जलवायु परिवर्तन र साँस्कृतिक सहकार्य रहेका छन् ।